भारत, केपी ओली र जीन्यूजसँगको अन्तरवार्ता - Ujyaalo Nepal
भारत, केपी ओली र जीन्यूजसँगको अन्तरवार्ता
By ujyaalo	 On २९ पुष २०७७, बुधबार ०८:३५ 22
कुटनीतिमा अनेक त्रुप खेलिने गर्छ । एउटा गतिलो त्रुप हो– व्यक्तित्व निर्माणको । देशअनुकुलको छबि बनाइदिने र आफू अनुकुलको फाइदा लिने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमण गएका थिए जनआन्दोलनपछि । उनलाई स्वागत गर्न उताका प्रधानमन्त्री सिंह एअरपोर्टमै आए । दक्षिण एशियाकै नेता घोषणा गरे । कोइराला सन्देहमा थिए ।
उनले नेपाल फर्केपछि आफूनिकटलाई सोधे–हो के ? लक्ष्मण घिमिरेले सुझाए– यो पर्सेको हो, जे भन्यो त्यही माने नेता मान्ने, नमाने बर्बाद बनाउने । पछि, गिरिजा न राष्ट्रपति बन्न पाए न उताको खास सम्मान । राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादी छबी आज पर्यन्त चर्चामा छ । तर, बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्नुपूर्व महेन्द्रले तत्कालीन भारतीय सेनाप्रमुखसँग ढोरीको चारकोशे झाडीमा एकान्त वार्ता गरेका थिए । सो वार्तामै संसद बिघटनको निर्णय भएको थियो ।
तर विघटन गर्दा बिपीमाथि आरोप लगाइयो–अराष्ट्रिय तत्वको । सो बखत सरकार र संसद विघटन नभएको भए नेपाली संसदीय अभ्यास कति परिपक्व हुँदो हो, सायदै सोचिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतसँगको सम्बन्ध उतारचढाबपूर्ण छ । पार्टीभित्र उनको पकड बढाउन मदन भण्डारी फाउण्डेशनको राम्रै योगदान छ । उता सो फाउण्डेशनको संजाल बिस्तारमा भारतीय आर्थिक सहयोग मुख्य छ । भारतीय दूतावासको वेबसाईटमै सो बारे हेर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ ओलीको राष्ट्रिय राजनीतिमा उदय भारतसँग डटेर मुकाबिला गर्ने नेताका रूपमा भएको हो । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एकाएक नाकाबन्दी निस्प्रभावी भएको तथ्यपनि छ ।
फेरि अहिले भारतीय खुपिया एजेन्सी, विदेश सचिव र नेतासँगको निरन्तरको छलफल पछि संसद विघटन भएको तथ्य जग जाएर छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तर्कपूर्ण हिसाबले भारतीय मिडियामा उत्तर दिएको सन्दर्भ हरेक नेपालीका लागि गर्वको बिषय हो । त्यसले सामाजिक संजाल तरंगित छ । यी अन्तरवार्ता ऋषि धमलाले ठाउँका ठाउँ माइक तेर्साएर गरेजस्ता होइनन् ।
बिशेष तयारी र प्रश्नको पूर्वजानकारी सहित गरिएका हुन् । भारतीय जी टिभीका सम्पादक टोलीसहित अन्तरवार्ताका लागि आएका थिए जो नेपाल र ओली बिरोधी वक्तव्यका लागि कुख्यात थिए र छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीका सामुन्ने उनको भाबभंगिमा गरुढको छायाँमा परेको सर्पजस्तो देखियो । यत्रो तयारीसहितको विशेष अन्तरवार्तामा उनको प्रस्तुती सिकारू पत्रकारभन्दा पनि फितलो र कमजोर ? यसो सोचि ल्याउँदा यिनको भूमिका बिषकन्योको हो की जस्तो देखिएको छ । सुमसुमाउने र ठूँग्ने ! सचेत पनि हुनुपर्छ, बीचबीचमा !
प्रकाशित: २९ पुष २०७७, बुधबार ०८:३५
धर्म र समृद्धिको अन्तर सम्वन्ध
ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षबीचको विवादमा को हो दोषी ?